Ahoana ny fomba fampiharana sy fampiasana | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Raha hampiasa io fotodrafitrasa io dia ilaina ny "fisoratana anarana ho an'ny mpampiasa Uguisu".Raha mila tsipiriany, jereo ny "What Uguisu Net?".
Ny tranokala tsirairay dia manaiky ny fampiasana fampiharana amin'ny loteria.Ho an'ny fotodrafitrasa banga aorian'ny loteria, ny fangatahana ankapobeny dia ekena amin'ny alàlan'ny laharana voalohany.
Ny fomba loteria sy ny fampiharana dia samy hafa arakaraka ny efitrano ampiasainao.Ho an'ny antsipiriany, azafady mba jereo ny latabatra momba ny fampiasana ny efitrano tsirairay.
(* Muroba dia teny iray maneho ny efitrano fandraisam-bahiny misy toeram-pivoriana, kianja filalaovana baseball, kianja filalaovam-baolina, sns. Amin'ny toeran'ny valan-javaboary.)
Ho an'ny saram-pampiasana trano sy ny saram-pampiasana trano ilaina amin'ny tranga hafa, azafady mba jereo ny pejy topy maso / fitaovana amin'ny efitrano tsirairay.
Ho fanampin'izany, azafady mba andoavanao ny saram-pampiasana trano amin'ny fotoana anaovana ny fangatahana hampiasana azy, ary ny saram-pampiasana tranokely alohan'ny hampiasana ny efitrano.
Fampidirana Ota Ward Plaza Facility
Ota Ward Hall / Fampidirana Facility Facico
Fampidirana Facility Daejeon Bunkanomori
Raha ampiasain'ny vondron'orinasa misahana ny asa mifanohitra amin'ny tanora, vondrona fampandrosoana ny tanora, vondrona tanora, na vondron'olona sembana, ary ny hetsika dia ho an'ny tombontsoam-bahoaka, dia hahena ny hetra ampiasana ny toeram-piasana.
Raha ivelan'ny paroasy ianao, dia handoa onitra 20% amin'ny fiampangana fotodrafitrasa fototra.
(Raha ny fampiasana ny varotra entana dia tsy misy sarany aloa mihoatra ny fampiasana ivelan'ny paroasy)
Rehefa mivarotra entana hahazoana tombony dia hampidirina 50% ny sarany fotodrafitrasa fototra.
Azafady mba jereo ny lisitry ny vidin'ny trano tsirairay ho an'ny fanasokajiana ny fotoana fampiasana.
Ny fotoana fampiasana dia misy ny fotoana ilaina amin'ny fanomanana sy fanadiovana.Ny fametrahana sy ny famoahana ireo fitaovana fampitaovana horonantsary sy sary nataon'ny mpiasan'ny tranom-bakoka dia hatao mandritra ny fotoana fampiasana.
Azafady, alao antoka fa mifikitra mafy amin'ny farany ianao mandritra ny fotoana fampiasana.
Raha mitondra sakafo, zava-pisotro, voninkazo vaovao na valizy avy any ivelany ianao, dia ento mivoaka sy mivoaka ao anatin'ny fotoana fampiasana.
Amin'ireto tranga manaraka ireto dia tsy azo ekena ny fampiasana ilay fotodrafitrasa.Ho fanampin'izay, na dia efa nankatoavanao azy io aza, azonay atao ny manafoana, mametra, na mampiato ny fampiasana azy.
Rehefa atahorana hanimba ny filaminam-bahoaka na ny fomba tsara sy ny fomba amam-panao.
Rehefa atahorana ny loza hitranga amin'ny tranga iray izay mampiasa fitaovana mampidi-doza.
Rehefa atahorana hanimba na hahafoana ny toerana na fitaovana fanampiana.
Rehefa nafindra na navotsotra ny zon'ny fampiasana.
Rehefa ekena fa tombontsoan'ny fikambanana iray mety hanao herisetra, fampijaliana sns.
Rehefa voahitsakitsaka ny tanjon'ny fampiasana na ny fepetra fampiasana.
Rehefa lasa tsy misy ilay fotodrafitrasa noho ny voina na tranga hafa.
Rehefa misy olana momba ny fitantanana ao amin'ilay fotodrafitrasa, toy ny rehefa mitabataba mafy.
* Tsy azo ampiasaina ny fiara famatsiana herinaratra satria manakorontana ny manodidina ny tabataba sy gazy mandrehitra.
Fanovana sy fanafoanana ny daty hampiasana
Raha misy fiovana amin'ny daty sy ora fampiasana, efitrano fampiasana sns, azonao atao ny manova ny fomba.Azafady mba mangataka fanovana ao anatin'ny vanim-potoana fanekena fampiharana voafaritra isaky ny toerana.Azafady mba tsy hanova na hanafoana ny fampiasana aorian'ny fanovana ny daty hampiasana sns, satria mety hanelingelina ny mpampiasa hafa izany.
* Ampiasao ny fankatoavana, ny rosia ary ny tombo-kasen'ny mpangataka (tsy azo ekena ny tombo-kase stamper) ho an'ny fangatahana.
* Ny fangatahana dia ho ekena amin'ny toerana hampiasanao.
Application vanim-potoana fanekena
Efitra lehibe / efitrano kely / efitrano fampirantiana Daty fampiasana
* Raha ny fizarana faha-5 an'ny studio mozika, hatramin'ny 7:XNUMX hariva amin'ny andro Amin'ny andro
Alohan'ny hampiasana fotoana
Efitra, efitrano malalaka, zoro fampirantiana, toerana malalaka Daty fampiasana
* Amin'ny maraina, raha ny sokajy voalohany, mandra-pahatongan'ny andro alohan'ny daty hampiasana Amin'ny andro
Fandraisana an-tanana ny sarany fampiasana noho ny fiovana na fanafoanana
Na dia foanan'ny mpikarakara ny fampiasana noho ny toe-javatra misy azy manokana aza dia tsy azo averina amin'ny laoniny ny fandoavam-bola aloa.Na izany aza, raha angatahana ny fanafoanana alohan'ny daty fampiasana dia voalaza fa haverina toy izao ny sarany.
* Raha mihoatra ny saram-pandoavam-bola avy hatrany ny saram-pampiovana novaina dia takiana aminao ny handoa ny tsy fitovizany.
* Raha manafoana ianao aorian'ny fanovana ny daty hampiasana azy, dia mety tsy hitovy ny sandan'ny vola averina amin'ny sarany fampiasanao.
* Mba hamerenana ny saram-pampiasana dia takiana taratasy fanekena fampiasana, tapakila, ary tombokase manokana an'ny mpangataka (tsy ekena ny tombo-kase karazana stamper).
Efitra fisoloana akanjo lehibe
Hatramin'ny 90 andro lasa izay Daty fampiasana
Hatramin'ny 60 andro lasa izay Daty fampiasana
Hatramin'ny 30 andro lasa izay
Sehatra efitrano lehibe ihany
Efitra kely / efitrano fampirantiana
Hatramin'ny 30 andro lasa izay Daty fampiasana
Hatramin'ny 15 andro lasa izay
Efitrano fivoriana, efitrano fanaon'ny Japoney, efitrano dite, efitrano fanazaran-tena
Gymnase / efitrano kanto / studio mozika
Hatramin'ny 7 andro lasa izay Daty fampiasana
Hatramin'ny 2 andro lasa izay
Efitra efitrano / multigpose
Efitrano fivoriana / atrikasa famoronana
Efitra manao japoney sy studio isan-karazany